Lix shuruud oo ciidanka Kenya uga baxayaan Soomaaliya oo la shaaciyey
Habraaca ay ciidanka Kenya uga baxayaan Soomaaliya oo lsoo bandhigay
Dowladda Kenya ayaa lagu waramay in ay dejisay qariiradii ay ciidamadeeda uga hayaami lahaayeen Soomaaliya.
NAIROBI, Kenya – Dowladda Kenya ayaa waxay dejisay qariiradda ay ciidamadeeda ugala baxeyso gudaha Soomaaliya oo ay joogaan tan iyo sanadkii 2011-kii, sidda uu ku waramay wargeyska afka dheer ee Daily Nation.
Istaraatiijiyaddan oo ka kooban lix mar-xaladood waxaa ugu horeysa in la abuuro xaalado ay ciidanka AMISOM uga hayaami karaan Soomaaliya oo ay kamid tahay dib-u-habeynta ciidanka qaranka.
Tani waxaa barbar socota in la suurtageliyo in ciidamadda ammaanka Soomaaliya ay hogaamiyaan howlgaladda nabadeynta.
Tiirka labaad waa in la abuuro xasilooni, nabad iyo barwaaqo ka dhacda Jubbaland isla markaana lasoo afjaro joogitaanka dagaalameyaasha Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysta degaanadda miyiga.
Sidda ku xusan warbixinta, shuruuda saddexaad waa in la helo hab maamul lagu xaqiijiyo ammaanka xadka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan kormeerid, darbiyo isku xira, wadooyin iyo godad ammaan.
Xeeladda afaraad ayaa ah in la xoojiyo howlgaladda wadajirka ah iyo xarumaha xakameynta ee magaalooyinka Nairobi, Mombasa, Wajir, Moyale, Busia, Namanga, Lamu iyo Lokichoggio.
Jaraa'idka ayaa intaas raaciyey in tiirka shanaad uu yahay iskaashi iy heshiis xoojinaya oo dhanka nabad-gelyadda guud ah oo dhexmara dowladdaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya.
"Tani waxaa qayb ka ah ciidamo isku dhaf ah oo dalalka Geeska Afrika sameystaan iyaddoo loo marayo urur goboleedka IGAD iyo EAC [ururka bulshadda bariga Afrika]," ayuu joornaalku raaciyey.
Tiirka ugu dambeeya isla markaana kamid noqon kara kuwa ugu muhiimsan waa in leyska kaashado soo afjarida xagjirnimadda, iyaddoo loo marayo la shaqeynta dadweynaha oo wacyigelin la siinayo.
Tan iyo markii ciidamadda Kenya ee KDF ay soo galeen gudaha Soomaaliya, Al-Shabaab ayaa wadankaas ka fulisay weeraro argagixiso oo ay ku dishay dad shacab ah iyo saraakiil, taas oo sarre u qaaday walaaca dadka.
Dowladda Soomaaliya oo jawaab culus u dirtay Kenya [Akhriso]
Soomaliya 18.02.2019. 00:05
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa qoraalka ku sheegtay inay...
Somalia oo rajeynaysa inay Kenya kaga guuleysto dacwada muranka Badda
Puntland 10.02.2019. 11:38
Soomaali kamid ah dad horleh oo Kenya ay ka heshay safmarka Covid19
Afrika 04.06.2020. 21:35
Shirkii saddex-geesoodka ee Farmaajo, Abiy iyo Uhuru oo dib-u-dhacay
Afrika 13.03.2020. 23:03
Xiisada Soomaaliya-Kenya: Wadahadal telefoon nabad ma dhalin karaa?
Afrika 08.03.2020. 06:50
Magacyadda Xildhibaanada loo xiray in uu casuumay taliyaha NISA
Afrika 01.03.2020. 16:30
Hogaanka siyaasadda Somaliland oo isku haysta "labinta" xiriirka Taiwan 07.07.2020. 07:30